Arizaka Rabekoto Raoul Efa ampy traikefa amin’ny fitantanana baolina kitra
9 ireo kandida navoakan’ny CE Foot-ball Malagasy fa hiatrika ny fifidianana ho filoha vaovao hitantana ny FMF « Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra » izay hotanterahina amin’ny 3 novambra 2018 ho avy izao.
Iray amin’izy ireo Atoa Arizaka Rabekoto Raoul. Azo lazaina efa tena ampy traikefa tanteraka ny lehilahy eo amin’ny fitantanana ny baolina kitra Malagasy fa izy no filoha lefitra am-perinasan’ity rafitra ity ankehitriny. Hainy tsara, araka izany, ny ambaindain’ny fitantanana ny baolina kitra Malagasy ary efa voasahany koa ny fifandraisana amin’ny rafitra iraisam-pirenena FIFA sy CAF noho izay andraikitra notanany izay. Manampy betsaka azy eo amin’ny fahaiza-mitantana ny maha Tale jeneralin’ny orinasa CNaPS azy izay nivoizany sy nampitainy tamin’ireo mpiara-miasa aminy ny « Culture de résultat » izay midika ho fibanjinana lalandava ny fahombiazana eo amin’ny atao. Efa nahavita be ary mbola hanohy hatrany ny fampiroboroboana ny baolina kitra Malagasy sy hampisondratra izany ho avo dia avo izy, araka ny nambarany tamin’ny resadresaka nifanaovana taminy nivantana, rehefa tonga eo amin’ny fitantanana an’ity rafitra ity. Marihana fa izy no kandida nifaninana tamin’ny filohan’ny FMF taloha, Atoa Ahmad, tamin’ny fifidianana filohan’ny FMF farany.